Izindaba - Amandla aphezulu nobuhlakani kungukhiye wokwephula inqwaba yokushaja
Amandla aphezulu nokuhlakanipha kuyisihluthulelo sokuphula inqwaba yokushaja
Kulezi zinsuku, izimoto ezintsha zamandla seziphenduke ukukhetha kwabathengi abaningi. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi njengezikhungo ezibaluleke kakhulu ezisekela izimoto ezintsha zamandla, ukushaja izinqwaba kubhekana nesikhathi esinde sokushaja, umthamo wensiza yokushaja onganele, nezinga eliphansi lobunhloli. Kungashiwo ukuthi ukushajwa kwezinqwaba yiyona nto enkulu evimbela ukuthuthukiswa okukhulu kwezimoto zamandla ezintsha.
Ngakho-ke, ukuthi ungaxazulula kanjani inkinga yokushaja sekuyinto ephambili kuyo yonke imboni. Abanye abangaphakathi bakholelwa ukuthi ubuchwepheshe bokushaja amandla amakhulu kuyisihluthulelo sokuphula inqwaba yokushaja ngokuzayo. Mayelana nalokhu, izinkampani zakwamanye amazwe zinokulandelwa. ISwitzerland ABB yethule inqwaba yokushaja okusheshayo iTerra High Power DC, engakhipha ama-350 KW, cishe kathathu kunenqwaba enkulu yokushaja iTesla. Ngaphezu kwalokho, isiteshi sokuqala sokushaja esisheshayo se-European Fast Charge Alliance Ionity naso senziwe sasebenza. Inqwaba yokushaja ikhokhiswa uhlelo lokushaja oluhlanganisiwe, futhi amandla okushaja afika ku-350 KW, angonga isikhathi sokushaja ngempumelelo.
I-ABBTerra High Power DC yokushaja okusheshayo
E-China, yiliphi izinga lobuchwepheshe bokushaja amandla amakhulu elakhiwe? Yiziphi izixazululo zokushaja ezikhona? Iya kulo mbukiso uzokwazi! NgoJuni 15-17, i-11th Shenzhen International Charging Station (Pile) technical Equipment Exhibition izobanjelwa eShenzhen Convention and Exhibition Center. I-Youyou Green Energy, i-Yingke Rui, i-Yingfeiyuan, i-Koshida, i-Polar Charger, i-Orange Cishe izinkampani ezingama-200, ezifana ne-Electric New Energy ne-Shenzhen Jiangji, zizobonisa izixazululo ezahlukahlukene zokushaja zeziteshi zamabhasi kanye nobuchwepheshe obusha nemikhiqizo yokushaja amandla amakhulu.
Phakathi kwezinkampani eziningi ezibambe iqhaza kulo mbukiso, imiphi imikhiqizo emisha iShenzhen Youyou Green Energy Electric Co., Ltd. (ebizwa ngokuthi “Youyou Green Energy”)? Kuyaqondakala ukuthi i-Youyou Green izobonisa uchungechunge ezintathu ze-ultra-wide voltage range njalo yokushaja imodyuli yochungechunge, i-State Grid njalo yokushaja imodyuli yochungechunge kanye ne-30KW ethuthukisiwe ye-E yokushaja imodyuli.
I-Youyou Green ingaba ngumkhiqizo ohola phambili embonini yemodyuli yokushaja. NgoJuni 2017, u-Youyou Green waba ngowokuqala ukudala imojuli yokushaja enamandla amakhulu engu-30KW. Ngemuva konyaka owodwa wezinto ezintsha zobuchwepheshe, u-Youyou Green wethule uchungechunge lwamamojuli wamandla we-ultra wide wide voltage series. Phakathi kwabo, ukusebenza kwamandla kagesi we-30KW we-ultra-wide voltage module UR100030-SW kusebenza kakhulu. I-UR100030-SW ifinyelela ibanga lamandla okukhipha angama-200-1000V, futhi ingakhipha i-1000V / 30A kumandla aphezulu ne-300V / 100A kumandla aphansi, ifinyelela amandla okukhipha amandla angama-30KW kububanzi bamandla kagesi. Inqwaba yokushaja eyenziwe yimodyuli ingakhipha isamba esikhulu sokushaja ngaphansi kwesimo sevolthi efanayo, ifushanisa kakhulu isikhathi sokushaja, ithuthukise ukusebenza kahle kokusebenza futhi inciphise izindleko zokusebenza.
Njengamanje, u-Youyou Green unochungechunge lomkhiqizo oluphelele kunawo wonke emkhakheni wokushaja amamojula wamandla enqwaba, kufaka phakathi: i-30KW chungechunge, uchungechunge lwe-20KW, uchungechunge lwe-15KW, i-grid kazwelonke eqhubekayo yamandla ochungechunge kanye ne-ultra-wide voltage range njalo amandla ochungechunge. Ngamandla okucwaninga nobuchwepheshe bokuqina, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, imodi yokuphathwa okuhlelekile kanye nocwaningo oluzimele nezinzuzo zokuthuthuka, inkampani iye yaziwa kabanzi ngamakhasimende. Ukuthembeka okuphezulu kwemikhiqizo yemodyuli ye-Youyou Green Energy kuyaziwa kahle, okungahlukaniswa nomoya wayo oyingqayizivele nokuphishekelwa kokugcina.
Ngaphezu kokushaja ngamandla amakhulu, ubuhlakani futhi buyisihluthulelo sokuphula inqwaba yokushaja. Njengamanje, amadolobha amaningi akha izinqwaba zokushaja ezihlakaniphile. Lezi zinqwaba zokushaja zihlanganisa ukushaja, ukulawula, ukuxhumana kwamafu nemisebenzi yokukhokha. Ngemuva kokuthi umsebenzisi angene ohlelweni lokushaja, angakhokhiswa ngokuswayipha noma ngokuskena ikhodi ukuze athathe amandla. Lapho ukushaja kuqediwe, amandla ayavalwa nge-othomathikhi ukuvimbela umlilo odalwe ukushaja ngokweqile. Ukukhokha ngekhodi ye-WeChat noma ye-Alipay, asikho isidingo sokushintshanisa izinhlamvu zemali nhlobo.
Abanye ochwepheshe bemboni bakholelwa ukuthi ukuthuthukiswa kwamanje kokushaja kwezinqwaba kuzinzile, ukushaja ngamandla amakhulu, ukushaja okungenantambo kuzoba umkhombandlela omkhulu wentuthuko embonini.
Isikhathi Iposi: Jul-20-2020